Bayern Munich oo u dhaqaaqeysa soo xero galinta xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid – Gool FM
(Yurub) 16 Juunyo 2019. Kooxda Bayern Munich ayaa isha ku heysa soo xero galinta mid ka mid ah xiddigaha Real Madrid inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Wargeyska “The Sun” ee dalka ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Bayern Munich ay ku qanciso kooxda Real Madrid sida ay kaga qaadan lahayd adeega xiddiga reer Weles ee Gareth Bale heshiis amaah oo mudo hal xili ciyaareed ah.
Kooxda Bayern Munich ayaa qorsheeneysa inay bixiso mushaarka Gareth Bale ee billaha ah uu ka qaato naadiga Real Madrid.
Tan iyo markii ay Bayern Munich ka dhaqaaqeen xiddigaheeda garbaha kaga ciyaari jiray ee Arjen Robben iyo Franck Ribéry dhamaadka xili ciyaareedka 2018/2019, kooxda reer Germany ayaa rajeeneysa inay hesho badalkooda, waxayna haatan isha ku hayaan adeega Bale.
Yeelkadeeda, Bayern ayaa diyaar u ah inay todobaadkii mushaar ahaan u siiso Gareth Bale £ 350,000.